Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း)
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းသည် လေပြွန်နှင့် အဆုတ်တွင်းရှိ လေပြွန်အခွဲများတွင် ဖြစ်သောအကျိတ်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့စေတတ်သည်။ ယခင်က ထိုရောဂါကို ကင်ဆာမဟုတ်သော အကျိတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုမူ အချွဲဂလင်းအကျိတ်များမှ လွဲပြီး ကျန်အကျိတ်များသည် ခန္ဓါကိုယ်အခြားနေရာများသို့ ပြန့်နှံ့တတ်ကြောင်း သိရှိပြီးဖြစ်သည်။
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ ရှားပါးသောကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ရက်သတ္တပါတ်၆ပတ်ထက်ပိုပြီး ချောင်းဆိုးနေခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲလက္ခဏာတွေကတော့ အရေပြားနီမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဆရာဝန်များလည်း အကြောင်းအရင်း အတိအကျကို မသိပါ။ အချို့ ကင်ဆာများမှာ မျိုးရိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဟော်မုန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် ကင်ဆာရောဂါစု ရှိခြင်း
ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းသို့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူထားခြင်း
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများမရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ကြောင်းသိဖို့ ဆရာဝန်က အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။
အသားစယူခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ် မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာ စစ်ဆေးကြည့်ပါမည်။
ဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ပုံရိပ်ဖော်ကြည့်ခြင်း။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်ထဲရှိ အကျိတ်ကို ရှာဖွေကြည့်နိုင်မည်။
သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် အစွမ်းထက်ရေဒီယို သံလိုက်လှိုင်းများကို သုံးပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ပုံရိပ်ဖော်ကြည့်ခြင်း။ အကျိတ်၏အရွယ်အစားကို သိနိုင်သည်။ မရိုက်မီ အရည်တစ်မျိုးကိုသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောထဲမှသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။ ထိုဆိုးဆေးကို သုံးမှသာ ပိုမို ရှင်းလင်းသောပုံရိပ်ကို မြင်ရမည်။
ဆရာဝန်က အကျိတ်ကို ရှာဖွေရန်နှင့် အခြားနေရာပြန့်မပြန့် ကြည့်ရန် အခြားစစ်ဆေးမှုများလည်း လုပ်နိုင်သည်။
Bronchial adenoma (လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် သင့် ကင်ဆာအမျိုးအစားနှင့် အဆင့်၊ အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ရွေးချယ်မှုအပေါ်လည်း မူတည်သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်း။ အဓိကကုသမှုဖြစ်သည်။ ကင်ဆာအကျိတ်နှင့် အနီးအနားရှိ တစ်သျှူးများကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ဖြတ်ထုတ်သည်။ ရောဂါပြန့်နှံ့မှု ရပ်တန့်စေရန် အနီးတဝိုက်ရှိ ပြန်ရည်ကျိတ်များကိုလည်း ခွဲထုတ်ရသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်း။ ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်ရန် စွမ်းအားမြင့် X-ray ကို သုံးသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ရောဂါခံစားရ သက်သာစေသည်။ ခွဲစိတ်ပြီးမှ လက်ကျန်ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရှင်းရန်လည်း သုံးနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပရှိ စက်တစ်ခုက ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်နည်းမှာ အကျိတ်အနားတွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဆေးတောင့်လေးတစ်ခု မြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာလျှင် ဆရာဝန်က ပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့် ရနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ
ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိထားသော နေရာတွင် နီမြန်းခြင်း
ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် ကုသမှုပြီးသည်နှင့် ထိုပြဿနာများ ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်း။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်ရန်သုံးသောဆေးဖြစ်သည်။ အကြောဆေးသို့မဟုတ် သောက်ဆေးအနေဖြင့် ပေးသည်။ ကင်ဆာပြန့်နေပြီးဖြစ်ပါက အခြားကုသမှုများနှင့်တွဲပေးနိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ပြီးမှ လက်ကျန်ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရှင်းရန်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းကြောင့် ရနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကုသခြင်း။ ကင်ဆာကို ရှာဖွေတိုက်ထုတ်နိုင်သည့် ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို အားဖြည့်ပေးသော ဆေးများဖြစ်သည်။ ကင်ဆာအကျိတ်ကို သေးငယ်သွားစေပြီး ကြီးထွားမှုရပ်တန့်စေသည်။
ပစ်မှတ်ထားကုထုံး။ သင့်ကင်ဆာအမျိုးအစားအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သော ကြီးထွားစေသည့်ပရိုတင်း သို့မဟုတ် မျိုးဗီဇကို ကင်ဆာမပြန့်နှံ့စေရန် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် လေပြွန်အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လေပြွန်အကျိတ်ကို ကုသမှုခံယူရာမှာ ဖိစီးမှုများနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခံစားချက်များကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနှင့် ကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြပါ။ ကုထုံးဆရာ/စိတ်ရောဂါပညာရှင်/နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသူ တို့ကလည်း သင့်သောကများ၊ ခံစားချက်များကို သက်သာစေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါတူသူတွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကူညီရေးအဖွဲ့ကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သင်ခံစားနေရတဲ့အတိုင်း ကြုံတွေ့ဖူးကြတဲ့၊ သင်ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောခြင်းဟာ အကူအညီ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
What IsaBronchial Adenoma? https://www.webmd.com/lung-cancer/bronchial-adenoma. Accessed November 1, 2017.
Bronchial Adenoma. http://www.nytimes.com/health/guides/disease/bronchial-adenoma/overview.html. Accessed November 1, 2017.